Global Voices teny Malagasy » Thailandy: Fikasana hanakana ny tranonkala manohitra ny fanjakana · Global Voices teny Malagasy » Print
Thailandy: Fikasana hanakana ny tranonkala manohitra ny fanjakana
Voadika ny 11 Febroary 2019 3:21 GMT 1	 · Mpanoratra Daniel Chandranayagam Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Thailandy, Fitsipika, Lalàna, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
(Marihina fa tamin'ny volana Oktobra 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nikasa ny hanangana rindrin'afo ny governemanta Thailandey mba hanakanana ireo tranonkala heverina ho maniratsira ny fitondram-panjaka ao amin'ny firenena, sy ny votoaty hafa amin'ny aterineto izay heverina ho tsy mendrika.
Araka ny tatitry ny vaovao , nahazo fitarainana miisa ny 1.000 mahery momba ny tranonkala izay heverina ho manohintohina ny fianakavian'ny mpanjaka ny Minisiteran'ny Fifandraisandavitra. Manana lalàna lese majeste henjana i Thailandy, izay fitondrana voafaritry ny lalampanorenana manana sazy an-tranomaizina eo anelanelan'ny 3 ka hatramin'ny 15 taona ho an'izay rehetra “manala baraka na maniratsira na mandrahona ny mpanjaka, ny mpanjakavavy, ny mpandova ny seza fiandrianana na ny Mpitaiza ny Mpanjaka mbola tsy ampy taona”. Na izany aza, voalaza fa mahalana ny fanenjehan'ny fitsarana.
Voalaza fa efa nanakana tranonkala i Thailandy na dia tamin'ny alàlan'ny fijerena isan-tranga aza no nanatanterahan'ny mpamatsy tolotra aterineto izany amin'ny fijerena ireo lisitra mainty nomen'ny manampahefana azy ireo. Ankoatra izay, manome ny polisy Thailandey ny fahefana hampihatra ny sivana amin'ny aterineto, ary manome sazy amin'ny fandikana ny fepetra voalazan'ny lalàna ny Lalàna momba ny Heloka An-tserasera, izay nampiharina tamin'ny taona (2007).
Na dia izany aza, ny tanjona napetraka mba hanaraha-maso sy hanakanana ny fihetseham-po an-tserasera tsy tia fitondram-panjaka tokana dia hanao toy izany ihany koa amin'ny tranonkala pôrnôgrafika na tranonkala mifandraika amin'ny fampihorohoroana, araka ny voalazan'ny Minisitry ny Fifandraisandavitra Mun Patanotai. Mampiasa vola mitentina 100 tapitrisa ka hatramin'ny 500 tapitrisa baht (2,9 tapitrisa ka hatramin'ny 14,6 tapitrisa dolara amerikana) ny tetikasa.
Araka ny tatitra dia nilaza i Mun fa hiady hevitra momba ny olana amin'ny sampam-pitsikilovana sy ny orinasam-pifandraisandavitra an'ny fanjakana ny minisitera. Nampiany ihany koa fa maherin'ny 80%-n'ireo tranonkala mpandika lalana no any ivelan'i Thailandy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/11/134706/
 tatitry ny vaovao: http://www.themalaysianinsider.com/index.php/world/11338--thai-govt-plans-to-block-inappropriate-websites-